Nhau - Kubva Kubvumbi 5 kusvika 20, tichapemberera mutambo wemasikati panguva ino perioud. Ndine urombo nezve chero chinhu inconveninet kwauri uye ndapota inzwa wakasununguka kundibata kana uine somethign chimbichimbi kuti upindure. Ndinoda kutora mukana uno kukushuvira iwe nevefaimili vako zvese zvakanaka kune anofara uye ane hutano chinese gore nyowani!
Kubva munaFebruary 5 kusvika 20, isu tichapemberera mutambo wezuva panguva ino perioud. Ndine urombo nezve chero chinhu inconveninet kwauri uye ndapota inzwa wakasununguka kundibata kana uine somethign chimbichimbi kuti upindure. Ndinoda kutora mukana uno kukushuvira iwe nevefaimili vako zvese zvakanaka kune anofara uye ane hutano chinese gore nyowani!
2020 Mutambo weChirimo
Kubva Feb 5th kusvika makumi mavirith , isu tichapemberera mutambo wemuchirimo panguva ino yeperioud. Ndine urombo nezve chero chinhu inconveninet kwauri uye ndapota inzwa wakasununguka kundibata kana uine somethign chimbichimbi kuti upindure. Ndinoda kutora mukana uno kukushuvira iwe nevefaimili vako zvese zvakanaka kune anofara uye ane hutano chinese gore nyowani!
Ndinotenda nekuda kwekunaka kwako uye kutsigira!
Sintered madhaimani router mabheti（tekinoroji yedu nyowani）
CNC Router Bit Kucheka Maturusi Dhinda Kuchera Bits Kune Dombo Marble Uye Granite
Nemukana wekuve unopinza, zvirinani abrasion kuramba, kusimba kwakasimba uye kusiri nyore kupora, ndiyo yakanakisa diki shank yekugedza maturusi, kukuya kunogona kushandiswa sedenderedzwa remukati, rakatenderedzwa, goronga, arc, koni uye imwe yakakosha nzvimbo.
Misiyano yezvakagadzirwa sintered, electroplated uye brazed zvigadzirwa:
1) Hupenyu hwakareba kwazvo
2) Kuzivikanwa kwemusika mukuru
3) Yakanyanya kushandisa renji: Inowanikwa yekucheka microcline, tile, kongiri, granite, machena negirazi
2) Kupinza kuri nani pane Brazed
3) Inowanikwa yekucheka machena negirazi
4) Hapana kutsemuka
1) Tekinoroji nyowani, inosangana zvirinani kupfuura pakutanga
2) Hupenyu hwakareba kupfuura electroplated
3) Yakanyanya kushanda kupfuura sintered
4) Yakanaka pane ese maviri ekucheka akaoma uye akanyorova kucheka
5) Inowanikwa yekucheka machena nesimbi